Uru nke igwe ojii kọwapụta maka eCommerce | ECommerce ozi ọma
Uru nke igwe ojii na-aza maka eCommerce
Ọ bụ echiche dị omimi nke na-abanye na teknụzụ ọhụụ yana site na mgbatị dị na azụmahịa kọmputa. N'ihi na dị ka a pụrụ isi kwuo ya, igwe ojii ecommerce ígwé ojii na-atụzi ihe na-abụkarị nke onyinye ọrụ na .ntanetị. Nke ahụ bụ, ebe igwe ojii na-arụ ọrụ bụ teknụzụ ọhụụ na-achọ ịnweta faịlụ na ozi anyị niile na Internetntanetị, na-enweghị nchegbu gbasara inwe ikike zuru oke iji chekwaa ozi na kọmputa anyị.
Na omume, ihe a na-akpọ igwe ojii kọmpụta e-azụmahịa nwere ezigbo ihe dị mkpa maka ngwaahịa, ọrụ na isiokwu ndị a na-esi na ụlọ ahịa dijitalụ ma ọ bụ azụmahịa. N'ụzọ dị otú a na ọ na-enyere ọwa ọhụrụ aka maka ya ịbanye n'etiti ndị ahịa ma ọ bụ ndị ọrụ nakwa na ha na-azaghachi ụkpụrụ nduzi ahịa dị elu site na echiche niile. Ruo n'ókè nke na enwere ike ikwu na-enweghị atụ ụjọ na ọ ga-ezighi ezi na echiche a na nso nso a bụ ntụaka maka azụmahịa kọmputa.
Site na nke a n'ozuzu, enwere ike ịhụ na ozi niile, usoro, data, wdg, dị na ntanetị ntanetị, dịka igwe ojii, yabụ onye ọ bụla nwere ike ịnweta ozi zuru oke, na-enweghị nnukwu akụrụngwa. Ya mere na n'ụzọ dị otú a, ha nọ n'ọnọdụ doro anya iji zụta site na atụmatụ ahịa dị iche iche dị iche iche nke na-ewepụta ọtụtụ atụmatụ ọhụụ gbasara ndị ọzọ.
1 Compgwé ojii kọwaa ecommere: uru gị
2 Onyinye ndị ọzọ nke sistemụ a nyere
3 Ọrụ igwe ojii
4 Clouddị igwe ojii na kọmputa
5 Ihe ndị ga-echebara echiche
Compgwé ojii kọwaa ecommere: uru gị
Ejiri usoro ahia a karie ihe niile site na ugwo onu ahia ya ma e jiri ya tụnyere usoro ndi ozo ma obu omenala. Ebe arụmọrụ dị elu karịa ihe niile n'okpuru usoro nke ọ dịghị mkpa itinye ego na nnukwu akụrụngwa, ma ọ bụ n'ụkpụrụ nke ụdị ọ bụla. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọ ga-adị ọnụ ala karị site n 'ọnọdụ akụ na ụba ebe ọ na-enweghị ego ọzọ n'ụdị ọ bụla.
Nchebe bụ onyinye ọzọ dị ukwuu ebe ọ bụ na ị ga-eburu n'uche na data na-agagharị n'igwe ojii ga-adị mma mgbe niile, ọbụlagodi n'ọnọdụ kachasị njọ maka ndị ọrụ. N'echiche a, ekwesịrị ịmara na ị ga-enwe mmesi obi ike zuru oke na data agaghị aga ndị ọzọ n'oge ọ bụla na usoro ahụ.
N'ezie ọ dịghị mkpa inwe ikike nchekwa dị ukwuu. Nke a bụ otu igodo iji kọwaa ihe igwe ojii kọwaa ecommerce. Dị ka nnukwu uru mgbe ọ na-abịa na nchekwa na nke na-akọwa ihe kpatara na ọtụtụ ndị ahọrọla usoro ihe a na ọnwa ndị na-adịbeghị anya.
Mana ọ bụrụ na e nwere ihe na-egosipụta ecommerce Cloud Mgbakọ na oge, ọ bụ n'ihi na ọ na-enye ozi na ozugbo. Ihe a dị mkpa na-egosi na ị nwere nweta ozi na ụfọdụ ọganihu tụnyere ndị ọzọ ụdị yiri nke a. Na ihe itunanya na-enye ozi nke nwere ike ịbụ nke dị oké mkpa ka e-azụmahịa si niile si ele ihe anya.
Onyinye ndị ọzọ nke sistemụ a nyere
Site na ọtụtụ uru anyị kọwaara gị n'elu, ọ bụghị naanị ha, mana na ntụle, a na-enyere ndị ọzọ aka nwere ike ịmasị ma ọ bụrụ na ị bụ onye nwe ụlọ ahịa ma ọ bụ azụmaahịa dị n'ịntanetị. Cone na ikpe na anyị ga-ekpughere gị n'okpuru:
N'ọnọdụ niile, ịnwere ike ịnweta oge ọ bụla na ebe ọ bụla ịchọrọ ebe ọ bụ naanị na ị chọrọ njikọ Internetntanetị. Enweghi ihe omuma ndi ozo nke puru iche karie ngwa ya. Udo ị nwere ịbanye na usoro nkwukọrịta a bụ ịrụ ụka adịghị ya bụ otu n'ime ihe mkpali dị ukwuu maka ego ọrụ. Site na ebe obula inwere ezigbo njikọ na ebe a na -ekwu igwe okwu.
Ọ bụrụ na ihe ị chọrọ bụ ntinye na ozi niile Ghaghi inwe obi abụọ na igwe komputa igwe ojii ecommerce bụ sistemụ ị kwesịrị ịhọrọ site ugbu a gawa. Ọ naghị enye gị ọtụtụ nsogbu ma n'aka nke ọzọ uru ga-aba ya ma e jiri ya tụnyere ụdị nhọrọ ndị ọzọ na mpaghara a. Ebe isi-erite uru bụ doro anya na gị electronic azụmahịa.
Ga-enwetakwa n’ọrụ niile ọsịsọ dabere na web. Nke a bụ ihe nwere ike ịbụ oke mkpebi mgbe ị na-arụ ọrụ ụfọdụ na ụlọ ahịa gị n'ịntanetị. Ọbụna iji nọgide na-enwe mmekọrịta na ndị ahịa ma ọ bụ ndị ọrụ nke ụlọ ọrụ gị, dị ka na-eme n'oge ahụ.
Na ngwụcha, ịnweghị ike ichefu eziokwu ahụ bụ na igwe ojii na kọmputa na ecommerce anaghị achọ nnukwu ego. Ọ bụrụ na, n'ụzọ megidere, enwere oke oke nwere ike ịnabata nzukọ gị. N'ọnọdụ ọ bụla, ị gaghị atụfu ụlọ ahụ na windo iji gwa banyere usoro a dị iche iche dịka ọ dị ọhụrụ.
Ikpokoro dị ka ọrụ na-enye onye ọrụ ihe ndị dị mkpa iji mepụta mmepe kọmputa, si otú a nwee ike ịmepụta ngwa na mpempe ngwanrọ na-enweghị mkpa ngwaọrụ ndị a na kọmputa. Otu n'ime uru ya bụ ịchekwa ịnweta ikikere maka mmepe nke ngwaọrụ yana ọ dịghịkwa mkpa ichegbu onwe gị maka ndozi ha, ebe ọ bụ na ọrụ ahụ n'onwe ya na-elekọta njikarịcha ha.
Ọ bụ ezie na n'aka nke ọzọ, ị ga-imegide eziokwu ahụ bụ na e nwere ụdị dịgasị iche iche dabere na nzuzo na ị chọrọ na na anyị na-ekpughe gị n'okpuru nke mere na ị nwere ha nta doro anya site ugbu a.
Otu n'ime ihe kachasị dị na ya bụ ihe a na-akpọ nọha ube onye m maara nweta ọrụ n'ụzọ ndị ọzọ. Na ha pụtara ọha apụtaghị na ha enweghị nchekwa.
Ọzọ nke formats na ị pụrụ ịmụta bụ nonwe ube na na na nke a e ji eziokwu na mgbe niile Ọ bụ igwe ojii maka iji onwe na ojiji nkeonwe.
Ọ bụ ezie na nke atọ dị maka ndị ọrụ nngwakọ ube. Ọ bụ ihe gbasara a ụdị dị mgbagwoju anya nke nwere njirimara nke ụdị ndị gara aga. Mana iji uru ọzọ ọ na - enye gị ohere ịme njikọ dịka akụkụ nke ọrụ ahụ bụ nkeonwe yana nke ọzọ kesara.
Clouddị igwe ojii na kọmputa
E nwekwara ọtụtụ usoro nke ị nwere ike ịhọrọ usoro kachasị amasị gị na nke usoro ndị dị mgbagwoju anya banyere nyocha ha. Anyị ga-ekwu ụfọdụ n'ime ihe ndị kachasị mkpa ka i wee nwee ike ịmatakwu ihe ị nwere ike ịchọta na ụdị igwe ojii na-arụ ọrụ.
Akụrụngwa dịka Ọrụ (IaaS): Ọ bụ nhọrọ kachasị mma maka sava ma ọ bụ nchekwa.
Software dị ka Ọrụ (SaaS): bara ezigbo uru ma ọ bụrụ na ị ga-eji ozi ịntanetị dị ka ngwa ọrụ.
Nweta dị ka Ọrụ (PaaS): site na ebe ị nwere ike ịmepụta ebe nrụọrụ weebụ gị azụmahịa igwe, ma ị nwere ihe niile, gụnyere ụgbọ ahịa, ndenye ọpụpụ, mbupu, na usoro ịkwụ ụgwọ na-agba na sava ahịa.
Ihe ndị ga-echebara echiche
Dị ka nchịkọta, na ịmatakwu ihe igwe ojii na-egosipụta na azụmahịa na e-commerce, anyị agaghị enwe ihe ọ bụla ma ọ bụghị ịchịkọta ụfọdụ onyinye nke usoro njikwa a nwere ike ịnye anyị. Dịka ọmụmaatụ, na ụfọdụ n'ime ihe ndị na-esonụ anyị ga-ekpughe n'okpuru:
Ọ bụ sistemụ na-enye anyị ohere ịchekwa nzuzo na mmekọrịta anyị yana nke na-enweta mkpa pụrụ iche n'oge dị mgbagwoju anya n'oge ndị a dịka ha dị taa. Ebee ka nche nke data anyị na ozi n'elu usoro ihe omuma nke uzo di nkpa karie nke a.
Ọ bụ otu n'ime atụmatụ kachasị mma iji ruo ọrụ na ụzọ ndị ọzọ. Na ihe ahazi dị ka otu n'ime ọnọdụ ma ọ bụ ọnọdụ ndị amalitela ịdị na ọnwa ndị na-adịbeghị anya. Ruo n'ókè na data na njikwa ihe ọmụma nwere ike ịtụle nke nwere ike ịgbanwe karịa ndị ọzọ.
Ọ dị mgbagwoju anya iji mezuo n'ihi njirimara ya pụrụ iche na nke a bụ otu n'ime ihe mere igwe ojii ji arụ ọrụ na ecommerce chọrọ ịmụtakwu ihe. N'ọnọdụ ụfọdụ na ọnwa ole na ole na-aga n'ihu na ọbụna iji usoro ọhụrụ a eme ihe. Achụkwala ma ọ bụrụ na ịchọghị nduzi ha n'oge ọrụ ahụ.
O nwere ike bụrụ otu n'ime usoro kachasị dị irè ma baa uru iji rụọ ụfọdụ ọrụ na ụlọ ahịa gị ma ọ bụ azụmahịa dijitalụ. Site na ọtụtụ elele nwere ike ịdị ezigbo mkpa iji mee ka azụmaahịa ahụ baa uru site na ụzọ ọhụụ ọhụụ ọhụụ.
Na n’ikpeazụ ị kwesịrị ịma na echiche a nọ na mmepe zuru oke n’ihi na a na-agbanwe ya oge niile site na njirimara ya pụrụ iche. Ghaghị ịmara nke ọma ihe ọ bụla a na-agbasa site na akụkọ kachasị ọhụrụ nke a na-eme na mpaghara a dịka ọ na-adị mgbe niile na ọnwa ndị na-adịbeghị anya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » CMS na Teknụzụ » Uru nke igwe ojii na-aza maka eCommerce
Kedu otu esi etinye RGPD na azụmahịa kọmputa?
Ebe e si nweta ngwa ngwa iji zụlite azụmahịa e-commerce gị